कसले कसलाई ढाँट्यो ?- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
सजायको नाममा शिक्षकले विद्यार्थीलाई मृत्यु नै हुनेगरी पिट्नु बालअधिकार हनन गर्नु हो  । बालबालिकालाई पिटेर अनुशासनमा राख्छु भन्नु मुर्खता हो  ।
मृत्यु नै हुनेगरी बालबालिकालाई पिट्नु संविधान विपरीत कार्य हो । बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको सजाय तथा यातनाबाट संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा बालअधिकार महासन्धिमा उल्लेख छ । यसलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ । तर बालबालिकामाथि विभिन्न बहानामा हिंसा भइरहेका छन् । हिंसाकै कारण बालबालिकाको मृत्यु भएका समाचार आइरहन्छन् ।
ज्ञानको ज्योति देखाउने गुरुको पिटाइले शिष्यले मर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो । बालबालिकाको कलिलो दिमागले गरेका गल्तीमा ज्यानै जानेगरी कुटपिट गर्ने मूर्खहरूलाई के भन्ने ? आवेग, उत्तेजना र रिसको भुमरीले हैन, धैर्य र सहिष्णुताले बालबालिकालाई खुसी पार्न सक्नुपर्छ । पिटाइ वा सजायले बालबालिकालाई असर गर्छ । तिनले गल्ती नगर्ने होइनन्, गर्छन् । गल्ती गर्ने उमेरै हो, तिनको के दोष ? गलतै गरेको छ भने पनि सच्याउन लगाउने हो । कुट्ने, पिट्ने र ज्यानै लिने होइन । अनुशासनको नाममा घरमा, विद्यालयमा या कुनै पनि स्थानमा बालबालिकालाई यातना दिने काम आपराधिक मनोवृत्ति हो । त्यसैले बालबालिकालाई राम्ररी पढाऊ । किन पिट्छौ ? सजाय दिन र पिट्न बन्द गर ।